बच्चाको व्यक्तित्व कसरी विकास गर्ने ? » Enavanari
बच्चाको व्यक्तित्व कसरी विकास गर्ने ?
प्रिन्सिपल, हाइड एण्ड सिक
हरेक बालबालिकाहरुले जन्मना साथै आफ्नो इन्टरपर्सनल स्किल डेभलभ गर्न सुरु गर्दछन् । बालबालिकाले जन्मने वित्तिकै आफ्नो आमासँग आँखा जुधाउन सुरु गर्दछन् । विस्तारै आफ्नो आमाको अनुहार आवाज, बोल्ने शैली र ध्वनी चिन्न सुरु गर्दछन् । जब बालबालिका दुई महिनाका हुन्छन् हाँस्न सुरु गर्दछन् र आमा बाबुले पनि बालबालिकाको हरेक हाउभाउबाट कम्युनिकेशन गरेको थाहा पाउँछन् । बच्चाले गरेको हाउभाउबाट आमाबाबुले आफ्नो बच्चामा आएको समस्या जस्तै थाकेको, दुखाई भएको, भोक लागेको तथा निन्द्रा लागेको इत्यादी थाहा पाउछन् ।
जब बच्चाको उमेर विस्तारै बढ्दै जान्छ बच्चामा इन्टरपर्सनल स्किल र सोसल स्किलको विकास हुँदै जान्छ । हरेक बालबालिकाको पहिलो शिक्षा आफ्नो घरबाट सुरुवात हुने गर्दछ । त्यसैले घर नै हरेक बालबालिकाको लागि पहिलो विद्यालय हो । घरबाट बालबालिकाले जुन शिक्षा व्यवहार पाँउछन् त्यस्तै स्वभावको छाप बालबालिकामा पर्ने गर्दछ । कलिलो बालमस्तिष्क आफ्नो वरीपरी रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुबाट बढी प्रभावित भएका हुन्छन् । त्यसैले सबै भन्दा पहिला आफ्नो घर भित्रका सदस्य जस्तै आमाबाबु दाजुभाई तथा दिदिबहिनीबाट भाषाको प्रयोग गर्न सिक्दछन् र उहाँहरुलाई हेरेर आफ्नो व्यक्तित्वको निमार्ण गर्ने गर्दछन् । ०–६ वर्षका बच्चाको अगाडी ठुलाहरुले जस्तो भाषाको प्रयोग तथा व्यवहार गरेका हुन्छन् त्यसको प्रभाव बच्चाको कलिलो मस्तिष्कमा छाप परेको हुन्छ । जब विस्तारै बालबालिकाको भाषाको विकास हँुदैँ जान्छ आफु वरीपरीका व्यक्तिले बोलेको सुनेर सभ्य ढङ्गले बोल्न सुरु गर्दछन् विस्तारै सम्मान गरेर बोल्न र आफु समान व्यक्तिसँग तथा साथी सँग कसरी बोले भनेर ईन्टरपर्सनल र सोसल स्किल आफुले परिचित भएको वातारण र अनुभव अनुसार सिक्दछन् त्यसैले बच्चाहरुको व्यक्तित्व विकासको लागि घरको वातावरण, बोल्ने शैली तथा भाषाको प्रयोग, हाउभाउ र बच्चाहरुमा गरिने व्यवहारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
बच्चाहरुमा व्यक्तित्व विकास गर्ने तरिका ः
बच्चाहरुसँग शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्ने ः
बच्चाहरुले घरका ठुला सदस्यहरुले प्रयोग गरिएको भाषाको सिको गर्ने गर्दछन् । बच्चाहरुको अगाडी मायालु भाषा प्रयोग गरि मिठो शब्दले बोल्नु पर्दछ ।
बच्चालाई खुसी बनाउने ः
आमाबाबुले बच्चाको लागि केही समय छुट्टाएर क्वालिटी टाइम दिने गर्नु पर्दछ । जस्तै बच्चासँग खेल्दिएर, बच्चाको कुरा सुनिदिएर, बच्चालाई हप्तामा एक पटक घुम्न लगेर उनीहरुसँग आफुपनि उनीहरु समान भएर उनीहरुलाई हसाउने कुरा गर्नु पर्दछ । बच्चाहरुलाई जहिले पनि खुसी बनाएर राख्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्दछ । बच्चाहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि सबै भन्दा पहिले बच्चा खुसी हुनपर्दछ ।
बच्चालाई गाली नगर्ने ः
०–६ वर्षका बच्चाहरु स्वभावले नै जिज्ञासु हुने गर्दछन् । यी उमेका बच्चाहरुलाई हरेक कुरा छोएर, सुघेर, छामेर, सुनेर र चाखेर अनुभव गर्न मन लाग्छ र यी अनुभव गर्दा गर्दै बच्चाहरु चकचके देखिन्छन् । चकचके पनले केही गल्ती पनि हुने गर्दछ । गल्ती गरेको छ भन्दैमा जिज्ञासु उमेरका बच्चाहरुलाई गाली गर्नु उचित हुदैन । गाली तथा हप्की दप्की यिनीहरुको कलिलो मस्तिष्कमा पछि सम्म गलत छाप परेको हुन्छ र साथ साथै उनीहरुको बाल मनोविज्ञनमा ठेस पुगेको हुन्छ । यसको नतिजा उनीहरुको स्वभाव पछि सम्मको लागि रुखो हुनेगर्दछ । त्यसैले बच्चाहरुलाई हरेक आमाबाबुले गालीको सट्टा फकाउने र सम्झाउने गर्नु पर्दछ ।
बाल मनोविज्ञान बुझेर ः
बच्चाहरुको र आमाबाबुको मनोविज्ञान धेरै फरक हुन्छ । आमाबाबुले सोच्ने र बुझ्ने तरिका भन्दा बच्चाको मनोविज्ञान धेरै फरक हुन्छ । बच्चाहरु ठुला बडाको नक्कल गर्ने अर्थात ठूला बडाले जे गर्यो उनीहरुले त्यसलाई जस्ताको तस्तै उतार्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । बच्चाहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि हरेक आमाबाबुले माथि दिए अनुसार राम्रो व्यवहार गर्ने तथा उहाँहरुलाई दिइने वरीपरिको वातावरणको परिस्थितीलाई सुधार गर्नु पर्दछ ।